I-High Purity Aluminium Oxide Metallized Washer Washer China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Metallized Ceramic Insulator > I-High Purity Aluminium Oxide Metallized Washer Washer
Ngokusekelwe ohlelweni lwethu lokukhiqiza oluvuthiwe, singakwazi ukukhiqiza kusuka usayizi obuncane kuya kwesilinganiso esikhulu sosayizi futhi siyakwazi ukufeza uhlobo oluthile lwe-metallization uhlobo engxenyeni ethile ye-ceramic disc ngokunyathelisa kwesikrini, ukubopha, ukupuniza.
Sinikeza ukukhethwa kwezinhlobo ze-metallization ukuze uhlangabezane nezinhlelo ezihlukene, izinhlobo eziyinhloko zensimbi ezifakiwe njengezilandelayo:
1. Umshini omkhulu we-ceramic disc + Mo / Mn metallization .......... 2. I- disc yeramic ephezulu + I-Silver plating ...................... ......... 3. I- disc ceramic enkulu + I-Copper plating
4. I- disc yeramic ejulile + I-Tin plating .......................... 5. I- disc yocaram ekhululekile + Mo / Mn metallization + i-nickle plating
6. I- disc yocaram ekhululekile + W i-metallization + igolide ye-plating
Ngaphandle kwalokho, i-disc ceramic disc, ibuye ikhiqize izinsimbi ezihlukahlukene ze-ceramic substrate, i-tube ceramic tube, i-ceramic ring ring, i-vacuum ceramic component. Kungakhathaliseki ukuthi ubukaphi amanye amasampula omshayeli, noma ubiza izindleko zokufuna ivolumu eliphezulu. Sizosiza ibhizinisi lakho.
Imishini yokukhiqiza eningi ihlanganisa, njengebhola lokuxuba i-grinder, ukwakha imishini, imishini yokusika, umshini wokuhlola othomathikhi, i-CNC, umshini wokugaya kahle. Ubukhulu obukhulu kunazo zonke kuya ku-800mm; ububanzi obuncane bungaba yi-1mm. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kwendabuko kungafinyelela ku-0.001mm.
Izitshalo ezithwala kakhulu, izigubhu ze-Electron, i-Gas release, i-Vacuum capacitor, i-Diode housings, Ama-tubyridi wegridi yamandla, Ama-tubes ahamba ngamagagasi, amasongo okufaka umshini nesilinda, amashubhu we-X njll nokunye.
Uma kungenjalo thina, ngubani?
Njengomthengisi othembekile asikaze sithinte amakhasimende ethu. Siyakhathalela ngawo wonke ama-oda. Siphakamisa ibhizinisi lakho.
Uma kungenjalo manje, nini?
Isivinini esheshayo sokuphendula amakhasimende uchungechunge lwemfuneko. Sinomsebenzi okhethekile wethimba enkonzweni yokuthengisa. Ngakho-ke singaphendula ngenkathi evunyelwe yimuphi umbuzo womkhiqizo we-ceramic we-Jinghui.